﻿ ​किन फरफराउँछ आँखा ? कसरी रोक्ने ?
​किन फरफराउँछ आँखा ? कसरी रोक्ने ?
आँखा फरफराउनुलाई मानिसले विभिन्न शुभ वा अशुभ लक्षणका कारणले हेर्ने गर्छन् । तर, आँखा फरफराउनुको मूख्य कारणबारे भने धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ ।
आजको वर्किङ कल्चरमा थकान र तनाव धेरै हुने गर्छ । आँखा फरफराउनु तनाव र थकानको संकेत पनि हुनसक्छ । विशेष रुपमा तब जब आँखामा तनावको जस्तो दृष्टि समस्यासँग सम्बिन्धत रहन्छ । तनावलाई कम गर्ने हो भने आँखा फरफराउन कम हुने विशेषज्ञ बताउँछन् ।
विशेषज्ञकाअनुसार ज्यादा मात्रामा कैफीन र अल्कोहलको प्रयोग गर्नाले आँखा फरफराउने गर्छ । यदी तपाई चिया, कफी, सोडा वा रक्सी ज्यादा पिउनुहुन्छ भने तपाईको आँखा धेरै फरफराउने गर्छ ।
आँखा फरफराउन कसरी रोक्ने ?